Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Qaxootiga oo Muqdisho Laga Xusay.
Maalinta Qaxootiga oo Muqdisho Laga Xusay.
Posted by ONA Admin	/ September 1, 2018
Maalinta Qaran ee qaxootiga soo noqonaya iyo barakacayaasha ayaa lagu iclaamiyey shirkii Qaxootiga Qaranka ee dhacay sanadkii 2017-kii waxaana sanad kadib munaasabadan looga hadlay marxaladda xiligan ee Qaxootiga iyo Barakacayaasha Soomaaliyeed ee dib uga soo laabtay dalal ay kamid yihiin Kenya, Yemen iyo Jabuuti sida uu sheegay Mudane Axmed C/kariin Nuur Guddoomiyaha Guddiga Qaran ee Qaxootiga iyo Barakacayaasha.
Luul Muuse Ismaaciil oo madax u ah qaxootiga kasoo laabtay dalka Yemen ayaa sheegtay in wali ay jiraan duruufo guud ahaan ay dareemayaan Qaxootigii dalka dib ugu soo laabtay. Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiir ku xigeenka Gargaarka Xildhibaan C/rashiid Maxamuud Xasan ayaa madasha ka sheegay in aan la ilaawin xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha soo laabtay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in dowladdu ay ka war qabto xaaladda dadkan, islamarkaana la wado qorshihii wax loogu qaban lahaa.